Barashada Juquraafiga SOOMAALIYA - XEEBTA IYO KALLUUNKA SOOMAALIYA QEYBTA 8-AAD - iftineducation.com
Barashada Juquraafiga SOOMAALIYA – XEEBTA IYO KALLUUNKA SOOMAALIYA QEYBTA 8-AAD
Xeebaha dalkeena aad bay u dheerar badan yihiin, waxaana laga dabtaa kalluun fara badan.
Bada cas iyo badweynta Hindiya labadu waxay ku can yihiin tiro badan oo haddana, isla mar ahaantii noocyadiisu aad loogu jecel yahay adduunweynaha.
Sanadihii danbe, dawladii dhexe ee kacaanka waxay ku dadaashay sidii ay horumar loogu gaadhi lahaa kalluumeysiga. Si ay arrintaasi u dhaqan gasho waxay dowladu xil iska saartay sidii ay qalab fududeeya kalluumeysiga uga keeni laheyd dibada. Qalabkaasi oo ay ka mid yihiin:
Qalabka lagu dabto kalluunka.
Qalabka qalijiya iyo kan qaboojiya
Waxaa isla mar ahaantii la dejiyay dad iskaashatooyin noqday oo soo daba kalluunka, sida iskaashadata kalluunka Baraawe, Dalal badan ayaa loo dhoofiya kalluunka dhulkeena, arrintaasi u guul weyn laga gaadhay waxay soo hoysay dhinaca dhaqaalaha lacag badan.
Sheeko Jaceyl: Alla Muxuu sidaan iigu galaa miyuu bini aadam aheen (Qeybtii 12aad)